Kwizithethe zobuKristu , izono ezona mpe mbelelo enkulu ekuphuculweni ngokomoya ziye zahlulwa ngokuthi " izono ezibulalayo ." Ziziphi izono ezifanelekileyo kule nqanaba ziye zahluka kunye nabafundi bezkolo zezeKrestu baye bavelisa uludwe oluhlukileyo lwezono ezibi kakhulu abantu abanokuzenza. UGregory Omkhulu wenza izinto ezibhekiselweyo namhlanje njengoluhlu olucacileyo lwezihlandla ezisixhenxe: ukuzingca, umona, umsindo, ukutshatyalaliswa, i-avarice, ukukrakra nokukhanga.
Nangona nganye ingakhuthaza ukuziphatha okukhathazayo, akusoloko kunjalo. Intukuthelo, umzekelo, inokulungiswa njengempendulo yokungabi nabulungisa kwaye njengenjongo yokuphumeza ubulungisa. Ukongezelela, olu luhlu alukwazi ukulungisa iziphathamandla ezonakalise abanye abantu kwaye kunoko zijolise kwizizathu: ukuhlambalaza nokubulala umntu "akusona isono esibulalayo" ukuba umntu uyashukunyiswa uthando kunokuba abe nomsindo. "Iziboni ezisixhenxe ezibulalayo" ke azikho nje ziphosakeleyo, kodwa zakhuthaze iimpazamo ezinzulu kwimilinganiselo yobuKristu kunye neyobufundisi .
Umthombo: Jupiter Images
Ukuziqhayisa-okanye ukungazi nto - kukukholelwa ngokugqithiseleyo kumandla omntu, njengokuba ungamniki isikweletu kuThixo. Ukuziqhayisa kwakhona kukuhluleka ukunika abanye imali ngenxa yabo-ukuba ukukhukhumeza komntu kukukhathaza, ngoko unetyala lokuziqhayisa. UTomas Aquinas wagxeka ukuba zonke ezinye izono zivela kwi-Pride, okwenza esinye sesono esibaluleke kakhulu sigxile kulo:
"Uthando olungathandabuzekiyo luyimbangela yesono sonke ... ingcambu yokuzikhukhumeza ifumaneka kumntu ongekho, ngandlela-thile, phantsi koThixo nolawulo lwaKhe."
Ukuphazamisa iSono Sokuziqhayisa
Imfundiso yobuKristu ngokuchasayo ikhuthaza abantu ukuba bazithobe kumagunya enkolo ukuze bazithobele kuThixo, ngaloo ndlela bavuselele amandla esonto. Akukho nto iphosakeleyo ngokuzikhukhumeza kuba ukuziqhenya kwinto enokuyenza kudla ngokuthe tye. Ngokuqinisekileyo akukho mfuneko yokubolekisa nayiphi na onkulunkulu izakhono kunye namava okumele achithe ixesha lokuphila kunye nokufezekisa; Iingxabano zobuKristu ngokuchasene nje zikhonza injongo yokuchaza ubomi bomntu nobuntu.
Ngokuqinisekileyo ukuba abantu banokuzithemba ngaphezu kwamandla abo kwaye oku kungakhokelela entlekele, kodwa kuyinyani ukuba ukuzithemba okuncinci kunokuthintela umntu ukuba aphumelele ngokupheleleyo. Ukuba abantu abayi kuvuma ukuba impumelelo yabo iyenayo, abayi kuqonda ukuba kusemandleni abo ukuqhubeka bekhuthazela kwaye bafikelele kwixesha elizayo.
Abantu abaziqhenyayo - abo banetyala lokwenza isono esibulalayo sokuzikhukhumeza - kuthiwa bayahlwayelwa esihogweni ngokuthi 'baphuke kwivili.' Akucaci ukuba esi sihlwayo sichaphazela njani ukuhlaselwa. Mhlawumbi ngamaxesha athile aphulaphulwa kwivili kwakukhohlwayo ngokuthotywa ngokunyanisekileyo kufuneka ukhuthazele. Ngaphandle koko, kutheni ungahlawuliswa ngokuba abantu behleka kuwe kwaye bakhohlekise ubuchule bakho ngonaphakade?
Umona ngumnqweno wokuba nezinto abanye abanayo, nokuba ngabazinto eziphathekayo, njengemoto okanye iimpawu zobuntu, okanye into engakumbi engqondweni njengokuba nombono omuhle okanye umonde. Ngokwesiko lobuKristu, ukukhwele abanye kubangela ukungabi nwabile ngabo. UAkimas wabhala ukuba umona:
"... iphikisana nothando, apho umphefumlo ufumana ubomi bawo obungokomoya ... Uthando luyavuya kummelwane wethu olungileyo, ngoxa umona uyabuhlungu ngenxa yalo."
Ukuphazamisa iSono Somona
Abafilosofi abangengabo abangamaKristu njengoAristotle noPlato bathi inzondo ikhokelela ekubeni nomnqweno wokutshabalalisa abo ababenomona ngako ukuze banqunywe ukuba banakho nantoni na. Ngenxa yoko umona uyaphathwa njengendlela yokucaphuka.
Ukwenza umona wesono kunomqobo wokukhuthaza amaKristu ukuba anelisekile koko anakho kunokuba aphikise abanye amandla angalunganga okanye afune ukufumana oko abanye abanakho. Kungenzeka ukuba ubuncinci abathile bokuba nomona ngenxa yokuba abanye bafumana okanye bangabikho izinto ezingalunganga. Ngenxa yoko, umona ungaba sisiseko sokulwa nokungabi nabulungisa. Nangona kukho izizathu ezisemthethweni zokukhathazeka malunga nentukuthelo, mhlawumbi kunokungalingani kokungalingani kunokugqithisa okungekho sikweni emhlabeni.
Ukugxininisa kwimvakalelo yomona kunye nokugweba ngaphandle kokungabi nabulungisa okubangela ukuba iimvakalelo zivumela ukungabi nabulungisa ukuqhubeka nokungabikho. Kutheni sifanele sivuyiswe ngumntu onokufumana amandla okanye izinto azifanele ukuba nazo? Kutheni sifanele sibuhlungu ngenxa yomntu ofumana uxanduva? Ngesizathu esithile, ukungabi nabulungisa ngokwaso akuthathwa njengesono esibulalayo. Nangona ukuba intukuthelo yayinobungendawo njengobungalingani bokungalingani, ithetha ngokuphathelele ubuKristu obuye kwabizwa ngokuba yinto yesono kodwa enye ingekho.
Abantu abanomona - abanetyala lokwenza isono esibulalayo somona - baya kuhlwayelwa esihogweni ngokuzibhaptiza emanzini amanqabileyo ngonaphakade. Akucaci ukuba luhlobo luni loxano olukhoyo phakathi kokusola umona nokunyamezela amanzi agqabisayo. Ngaba kubanda ukuba bafundise ukuba kutheni ukungafuni ukuthanda abanye abantu? Ngaba kufuneke ukuba zikhuphe izifiso zabo?
I-Gluttony ixhomekeke ekudleni kakhulu, kodwa inomxholo obanzi oquka ukuzama ukutshisa ngaphezulu kwananto kunokuba uyifunayo, ukutya kufakwe. UTomas Aquinas wabhala ukuba i-Gluttony yile:
"... akukho nqweno yokutya nokusela, kodwa umnqweno omkhulu ... ukushiya umyalelo wesigqibo, apho ubuhle bokuziphatha obuhle buquka."
Ngaloo ndlela ibinzana elithi "igundutye isilungiselelo" asinjengokufana nomntu onokucinga.
Ukongeza ngaphezu kokwenza isono esibhubhisayo sobutywala ngokutya okuninzi, umntu unokukwenza ngokutya ezininzi izixhobo (amanzi, ukutya, amandla), ngokuchitha imali ngokugqithiseleyo ukuba abe nokutya okhethekileyo, ngokuchitha imali eninzi ukuba neyona nto ininzi (iimoto, imidlalo, izindlu, umculo, njl.), njalo njalo. Uzuko lunokuthiwa njengesono sokuthanda izinto eziphathekayo ngokwezinto eziphathekayo kwaye, ngokusemgangathweni, kugxininisa kwesi sinokukhuthaza abantu abanobulungisa kunye nolinganayo. Kutheni oku akuzange kwenzeke oko, nangona kunjalo?
Ukuphazamisa iSono soBugumo
Nangona le ngcamango inokuba yinto enqwenelekayo, ngokuqhelekileyo ukufundisa kobuKristu ukuba ukratshi sisona sinye indlela efanelekileyo yokukhuthaza abo bancinane kakhulu ukuba bangafuni ngakumbi kwaye banelisekile ngeendlela ezincinane abanako ukuzidla, kuba ezinye ziza kuba zizono. Ngelo xesha, nangona kunjalo, abo basesidla ngokudlulileyo abazange bakhuthazwe ukuba benze ngokuncinci ukuze abahlwempuzekileyo nabalambile banakho.
Ukusetyenziswa kwexesha elide kunye nokusetyenziswa "okubonakalayo" kuye kwahlala kunceda iinkokeli zaseNtshona njengendlela yokubonisa ukuphakama kwezentlalo, ezopolitiko kunye nezemali. Nangona iinkokeli zonqulo ziye zathweswa unetyala lobuqhetseba, kodwa oku kuye kwachanikwa ngokukhazimulisa ibandla. Ngakuphi ixesha lokugqibela owake weva inkokheli enkulu yamaKristu ekugqibeleni ukugxekwa?
Cinga, umzekelo, ukudibanisa kwezopolitiko phakathi kweenkokheli zentloko kunye namaKristu alondolozayo kwiPublic Republic Party . Yintoni eyayiza kwenzeka kulo mlinganiso ukuba amaKristu alondolozayo aqala ukugweba ukuhaha nokukhwabanisa ngokufanayo nangoku nje ngoku baxhomekeke kwinqweno? Namhlanje ukusetyenziswa okunjalo kunye nokuthanda izinto eziphathekayo kuhlanganiswe ngokupheleleyo kwinkcubeko yaseNtshona; Bakhonza iimfuno ezingekona nje iinkokeli zenkcubeko, kodwa kunye neenkokheli zamaKristu.
I-Gluttonous - abanetyala lesono sobuqili - baya kugwetywa esihogweni ngokunyanzelisa amandla.
Ikhanuko kunye neLustful
Ukukhanukela ngumnqweno wokuba novuyo ngokwenyama, ngokwenene (kungekhona nje ezo ezo zesondo). Umnqweno wokuzonwabisa ngokwenyama uthathwa njengesono ngenxa yokuba kusenza singayithobeli iimfuno ezibalulekileyo ezingokomoya okanye imiyalelo. Umnqweno wesondo unesono ngokobuKrestu bobuNtu kuba lukhokelela ekusebenziseni ubulili ngaphezu kokuzala.
Ukugxeka ukukhanukela nokuzilolonga ngokwenyama yincoko yomgudu wobuKristu jikelele wokukhuthaza ukuphila emva kwalowo mphefumlo kunye nento ekufuneka inike ngayo. Unceda ukuvala abantu kwisigqibo sokuba isondo kunye nobulili zikhona kuphela ngenxa yokuzala , kungekhona othandweni okanye nje ukuzonwabisa kweziganeko ngokwabo. Ukutshatyalaliswa kwamaKristu okonwaba ngokwenyama, kunye nokuziphatha ngokwesini, sele kukho phakathi kweengxaki ezinzulu kakhulu zobuKristu kuyo yonke imbali yayo.
Ukuthandwa kwekhanuko njengesono kunokungqinelwa kukuba ezinye zibhalwa ngokugwetywa kwayo kunokuba kukho naziphi na ezinye izono. Kwakhona kwesinye seziphilo ezisixhenxe zokufa abantu abaqhubeka bezenza njengezono.
Kwezinye iindawo, kubonakala ngathi yonke imilinganiselo yokuziphatha eyancitshiswe kwimimandla eyahlukeneyo yokuziphatha ngokwesondo kunye nenkxalabo yokugcina ucoceko ngokwesondo. Oku kuyinyani ngokukhethekileyo xa kuziwa kwi-Right Christian - akukho sizathu esihle sokuba phantse yonke into eyithethayo "ngexabiso" kunye "neentengo zeentsapho" zibandakanya isondo okanye ubulili ngendlela ethile.
Abantu abanomdla - abo banetyala lokwenza isono esibhubhisayo sokukhanga - baya kuhlwayelwa esihogweni ngokutshiswa ngomlilo nesulfure. Akukho nto ibonakala inxibelelwano olukhulu phakathi kwesi nesono ngokwawo, ngaphandle kokuba umntu ecinga ukuba ixesha elithile elithandwayo liye "litshatyalaliswa" ngokuzilolonga ngokwenyama kwaye kufuneka ngoku ukunyamezela ukutshutshiswa ngumzimba.
Intukuthelo kunye nolaka
Intukuthelo - okanye ingqumbo-isono sokugatya uthando kunye nokunyamezela kufuneka sivalele abanye kwaye sikhethe ukunyanelana okanye ukuxhalaba. AmaKristu amaninzi athatha ixesha elidlulileyo (njenge-Inquisition okanye i- Crusades ) inokubonakala ibangelwa ngumsindo, kungekhona uthando, kodwa baxoxwa ngokuthi isizathu sokuba babenothando lukaThixo, okanye uthando lomphefumlo womntu-ukuze uthando olukhulu, enyanisweni, ukuba kwakufuneka ukubabalimaze ngokwenyama.
Ukugwenxa kwengqumbo njengesono kuyanceda ukuphelisa imizamo yokulungisa ukungabi nabulungisa, ngakumbi ukungabi nabulungisa kweziphathimandla zonqulo. Nangona kuyinyaniso ukuba ingqumbo ingakhokelela ngokukhawuleza umntu ukuba aphelelise ngokungekho sikweni, oko akuthethi ukugweba ulaka. Ngokuqinisekileyo akunakulungele ukugxila kwingqumbo kodwa kungekhona kwingozi ebangelwa ngabantu egameni lothando.
Ukuphazamisa isono solaka
Kungatsholwa ukuba imbono yobuKristu "yentukuthelo" njengesono ihlangabezana neziphene ezinzulu kwiindlela ezihlukeneyo. Okokuqala, nangona kunjalo "sinesono", mhlawumbi, iziphathamandla zobuKristu ziye zakhawuleza ukuphika ukuba izenzo zabo zikhuthazwe yiyo. Ukubandezeleka kwabanye kukuba, ngokudabukisayo, akunakwenzeka xa kufikelelwe ekuhloleni imicimbi. Okwesibini, ilebula "yentliziyo" ingasetyenziswa ngokukhawuleza kwabo bafuna ukulungisa ukungabi nabulungisa abaholi beecawa abazuza kuyo.
Abantu abanomsindo - abo banetyala lokwenza isono esibulalayo somsindo - baya kuhlwayelwa esihogweni ngokutshabalalisa ubomi. Kukho kubonakala kungabikho nxu lumano phakathi kwesono somsindo kunye nesohlwayo sokuqhawulwa ngaphandle kokuba kudibanisa umntu into enomntu onomsindo. Kwakhona kubonakala kungenangqondo ukuba abantu baya kuhluthwa "baphile" xa kufuneka ukuba bafile xa befika esihogweni. Ngaba akukho nto ifuna ukuba iphile ukuze idibaniswe?
Ubuhaha - okanye i-avarice - ngumnqweno wokufumana inzuzo. Kufana noBuguttony and jealousy, kodwa ibhekisela ekuzuzeni kunokusetyenziswa okanye ukufumana. UAkhamas wayegwebe ukunyuka ngenxa yokuba:
"Sisona isono ngokumelene nommelwane womntu, kuba umntu oyedwa akanako ukugqithisa-ubuninzi bendyebo yangaphandle, ngaphandle kwesinye indoda esilahlekileyo ... kuyisono kuThixo, njengokuba zonke izono zenyama, ngenxa yokuba umntu uyalahla izinto ezingunaphakade ngenxa yezinto zexeshana. "
Ukuphazamisa iSono Senkanuko
Amagosa ezenkolo namhlanje abonakala engavumi ukugweba indlela abatyebi be-capitalist (kunye namaKristu) aseNtshona abadla ngayo ixesha elide ngelixa ihlwempu (nakwi-West nakwezinye iindawo) inamalungelo amancinci. Oku kungenxa yokuba ukuhaha ngeendlela ezahlukeneyo kungenxa yesiseko soqoqosho lwangxowa-mali lwangoku oluntu apho uluntu lwaseNtshona lusekelwe khona kwaye iicawa zamaKristu namhlanje zihlanganiswe ngokupheleleyo kule nkqubo. Ukugxeka, ukugxekwa ngokunyaniseka kuya kubakhokelela ekugxeka okuqhubekayo kwintengiselwano, kwaye amasonto ambalwa angamaKristu abonakala ekulungele ukuthatha ingozi eza kuvela ngesimo esinjalo.
Cinga, umzekelo, ukudibanisa kwezopolitiko phakathi kweenkokheli zentloko kunye namaKristu alondolozayo kwiPublic Republic Party. Yintoni eyayiza kwenzeka kulo mlinganiso ukuba amaKristu alondolozayo aqala ukugweba ukuhaha nokukhwabanisa ngokufanayo nangoku nje ngoku baxhomekeke kwinqweno? Ukukhanyela ukuhaha kunye nobukhulu bezentengiselwano kwakuya kwenza amaKristu aphikisana nenkcubeko ngendlela engazange abe nayo ukususela kwimbali yabo yokuqala kwaye akunakwenzeka ukuba baya kuphendulela imithombo yezemali ebondlayo kwaye bahlale bebutyebi kwaye banamandla namhlanje. AmaKristu amaninzi namhlanje, ngokukodwa amaKristu alondolozayo, azama ukupendela ngokwawo kunye nokunyakaza kwabo "njengenkcubeko," kodwa ekugqibeleni ukusebenzisana kwabo kunye nezentlalo, ezopolitiko kunye nezoqoqosho kubambelela ekuqiniseni iziseko zaseNtshona.
Abantu abakrakrayo - abanetyala lokwenza isono esibulalayo sokuhaha - baya kugwetywa esihogweni ngokubiliswa bephila kwioli kuze kube phakade. Kukho kubonakala kungabikho nxu lumano phakathi kwesono sokunyuka kunye nesiluleko sokubiliswa kwioli ngaphandle kokuba bebiliswe kwioli engavamile, eyabiza.
Sloth and Slothful
Kutheni kufuneka i-Sloth ijeziswe kwiSihogo ngokuxhonywa kwiNyoka yeNyoka? Ukugweba i-Slothful: Isijeziso esihogweni sesono esibulalayo seStrothi siya kuNqotshwa kwiNyoka yaseNyoka. Umthombo: Jupiter Images
I-Sloth yiyona nto ingacaciswanga ngayo ngeeShenxe ezisiNgcileyo. Ngokuqhelekileyo kuthathwa njengesivila, kuchaneke ngokuchanekileyo njengengqalelo. Xa umntu engabakhathaleli, abasayi kubakhathalela ngokwenza umsebenzi wabo kwabanye okanye kuThixo, kubangele ukuba bangayinaki impilo yabo yokomoya. UTomas Aquinas wabhala esithi:
"... kungendawo ekusebenzeni kwayo, ukuba ixinzelele umntu ukuba amkhuphe ngokupheleleyo kwizenzo ezilungileyo."
Ukuphazamisa iSono SesiSet
Ukugxeka i-sloth njengemisebenzi yesono njengendlela yokugcina abantu basebenzayo ecaweni xa beqala ukuqonda indlela inkolo engenalusizo kunye ne -ism. Imibutho yonqulo idinga abantu ukuba baqhubeke besebenza ukuze baxhase isizathu, ngokuqhelekileyo bachazwa ngokuthi "isicwangciso sikaThixo," kuba loo mibutho ayivelisi nto yexabiso elingenjalo ukumema nayiphi na ingeniso. Abantu ke kufuneka bakhuthazwe ukuba bazinikele "ixesha lokuzithandela" kunye nezibonelelo kwiintlungu zesigwebo esingunaphakade.
Ubungozi obuninzi kunqulo aluphikisi ukuchasana nenkolo kuba inkcaso ibonisa ukuba inkolo ibalulekile okanye ifuthe. Ingongelo enkulu kunqulo ngokwenene ayinandaba ngenxa yokuba abantu abanamdla ngezinto ezingabandakanyekanga. Xa abantu abaneleyo bengenandaba necawa, ngoko unqulo luye lungafanelekanga. Ukunciphisa inkolo kunye nobuqhetseba eYurophu kubangelwa ngabantu abangakhathaliyo kwaye bangafumani unqulo oluchaphazelekayo kunokuba abachasayo benkolo banqabise abantu ukuba inkolo ayiphutha.
Abantu abanentloni - abantu abanetyala lokwenza isono esibulalayo se-sloth - bayahlwayelwa esihogweni ngokuphonswa kwiintonga zeenyoka. Njengayezinye izijeziso zesono ezibulalayo, akubonakali ukuba unxibelelwano phakathi kwe-sloth nenyoka. Kutheni ungayifaki i-slothful in watering or oil oil? Kutheni ungabenze baphume ebhedeni baze baye emsebenzini ukuze batshintshe?
Ibali le-Orbit of Orbit around the Sun
Eyona mikhulu kakhulu kwiMbali ye-Olympic Gymnastics
Ukuvula ifowuni inceda ukujikeleza iChi
Indlela yokubopha kwaye udwebe i-Glass Tubing
Izizathu Zokuba Zihle - Umthetho Wokuqala
Iingoma Zothando ZeSarojini Naidu (1879 - 1949)